The realyourbrainonporn (scienceofarousal.com) "လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူပုဒ်မ" ကိုဖြိုခွဲခြင်း - ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု၊ အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်ခြင်းဆိုင်ရာသုတေသန - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌လောင်းခြင်း
The realyourbrainonporn (scienceofarousal.com)“ လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူပုဒ်မ” - ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု၊
လိင်ဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူဤအပိုင်းတွင်၊ သင်သည်ဘက်လိုက်မှုရှိသော (သို့) လူသိရှင်ကြားလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလိင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့်သူတို့၏မဟာမိတ်များ၏အမြင်များကိုစိုးရိမ်လျှင်၊ သင့်အတွက်သတင်းများရှိသည်။ သင်၏အဆင်ပြေစေရန်အတွက်ကြီးမားသော Porn Science Deniers အဖွဲ့သည်ယခုအခါသူတို့ကိုယ်သူတို့သီးသန့်ကလပ်တစ်ခုအဖြစ်ကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပူဖောင်းထဲမှာဂုဏ်ယူစွာပုံဖော်လို့ရပါတယ် - https://www.realyourbrainonporn.com/experts အသစ်က site ကိုတာဝန်ရှိသည်သူများသည်အတွက်စေ့စပ်နေကြတယ် ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု of YourBrainOnPorn.com။ imposter site အသစ်သည်“ ကျွမ်းကျင်သူများ” ၏“ site” ကိုလျင်မြန်စွာအစားထိုးခဲ့သည်။arousal ၏သိပ္ပံ“ imposter site သို့ visitors ည့်သည်များအားလမ်းကြောင်းပေးသည့် URL” ။ ထို site အသစ်သည် visitors ည့်သည်များအားစာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီ၏အလယ်ဗဟိုနှင့်အတူလှည့်စားရန်ကြိုးစားသည်။"Porn တွင်အစစ်အမှန်သင့်ဦးနှောက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် အဆိုပါ tab ကိုမဟုတ်မမှန်ကြေညာနေစဉ် "Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်။ "
2011 မတိုင်မီကတည်းကညစ်ညမ်းဆွေးနွေးငြင်းခုံခဲ့ပွီးလြှငျ, ငါတို့ဆက်ဆက် stifle ရန်ဆန္ဒရှိကြဘူး, မကျွန်တော်အမြင်များဆန့်ကျင်, ကိုကွောကျရှံ့ကြဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကတန်ဖိုးရှိ Porn သိပ္ပံ Deniers ၏ဤအသစ်ကစုပေါင်းများစွာကိုအဖွဲ့ဝင်များကကောင်းစွာ YBOP နှင့်အခြားညစ်ညမ်းသံသယဝါဒီသိဖြစ်ကြောင်းထွက်ညွှန်ပြထင်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ကသို့၎င်းတို့၏လမ်းကိုရှာဖွေရာဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်လေ့လာမှုများနှင့်များစွာသောကြက်တူရွေးကလက်ခံလိုလားသူစက်မှုလုပ်ငန်းစကားပြောအမှတ်စာရေးဆရာများဖြစ်ကြသည် ဘက်လိုက် (ထားရှိ?) ခေတ်ရေစီးကြောင်းစာနယ်ဇင်းဆောင်းပါးများ.
အဆိုပါ Deniers ၏အချို့ မှန်မှန်သတင်းသမားတွေလှည့်ဖြား၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်အယ်ဒီတာများ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုတေသနစစ်မှန်တဲ့ချိန်ခွင်လျှာအကြောင်းကို။ အပေါ် လူမှုမီဒီယာ နှင့် ဆောင်းပါးတွေကို တင်. သူတို့သူတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့အစုအဝေးမြှင့်တင်ရန် ချယ်ရီ-ခူး, ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ် စစ်မှန်တဲ့သက်ရောက်မှုတွေရှေ့နောက်မ သူတို့ရဲ့အချက်အလက်များ၏။ အလည်အပတ် ဒီစာမျက်နှာ သူတို့ရဲ့အများဆုံးမေးခွန်းထုတ်စရာသားမွေးတချို့၏ဝေဖန်မှုကိုတွေ့မြင်ရန်။
ဤအ Deniers အများအပြားမှန်မှန်လူမှုရေးမီဒီယာသို့မဟုတ် Co-ရေးသားပညာသင်နှစ်သို့မဟုတ်ပေါ်ပြူလာဆောင်းပါးများအပေါ်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပေမယ့်, ထိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီအဖွဲ့ဝင်ယခုတိုင်အောင်အမှန်တရားနှင့်သိပ္ပံများ၏လွတ်လပ်သောနှင့်ဘက်မလိုက် purveyor ဖြစ် purported သိရသည်။ သို့သျောလညျး YBOP နဲ့တခြားညစ်ညမ်းသံသယဝါဒီရှည်လျား Deniers ၏ဤ cliquish တီးဝိုင်းများ၏အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့ဝင်များကဂျာနယ်လစ်ကြိုးကိုင်, လင်းလင်းရည်ညွှန်းနှင့်နောက်ကွယ်မှပရိယာယ်ပြုမည်သိရစကားပြောအချက်များကိုမျှဝေ, အုပ်ချုပ်အလောင်းတွေအီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်ပင်သံသယရှိနည်းလမ်းတွေထဲမှာ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်လွှမ်းမိုးခဲ့ကြ (ဤ2စာမကျြနှာကဆိုပါတယ်အပြုအမူတွေ၏ကျယ်ပြန့်မှတ်တမ်းတင်ပေး: စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2).
အဆိုပါနှစ်ဦးကိုအများဆုံးအသံများနှင့်အကောင်းဆုံးလူသိများ Deniers, နီကိုးလ် Prause နှင့်ဒါဝိဒ် Ley, အညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူပျူငှါနွေးထွေးသောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်ဖို့ပေါ်လာ:
ဒါဝိဒ်သည် Ley ယခုယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး xHamster နေဖြင့်လျော်ကြေးငွေခံရနေပါသည်!
နီကိုးလ် Prause လွှမ်းမိုးမှုကို Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
Prause နှင့် Ley လည်းဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်းအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေမည်အကြောင်း, ရည်မှန်းချက်သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီး, ယုံကြည်သူအုပ်စုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုပစ်မှတ်ထား, ပေးခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်အသရေဖျက်မှုအတွက်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် cyberstalking စေ့စပ်ပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်၏အနည်းငယ်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ် malfeasance ၏ Prause နှင့် Ley ရဲ့ရှည်လျားသမိုင်းသတိထားဖြစ်ကြသည်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျော်ဖြစ်ရပ်များရာပေါင်းများစွာမှတ်တမ်းတင်:
ဂယ်ရီ Wilson နှင့်အခြားအရာများစွာကို Nicole Prause ၏ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှု။
Prause သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။Donald ဟီလ်တန်, MD & Nofap တည်ထောင်သူ အလက်ဇန်းဒါး Rhodes), တစ်ဦး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုကိစ္စနှင့် ကိစ္စတွင်ကီထိုင်တံဆိပ်.
RealYBOP ၏“ လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူပုဒ်မ” ကိုအောက်ပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်သူများ၏“ သုတေသနစာမျက်နှာ” ကို၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်ထားသည့်အဝေးရောက်လေ့လာမှုများ၊ ဘက်လိုက်မှု၊ porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com").
မှတ်ချက် - RealYBOP ၏သုတေသနစာမျက်နှာတွင်ချယ်ရီရွေးသည့်စာရွက်များပါ ၀ င်သည်။ အပြာအသုံးပြုမှုသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်ပိုမိုသာတူညီမျှဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားယုံကြည်စေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဒီနေရာကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရှင်းထားတယ်။ အမျိုးသမီးများနေ့ပုဒ်မဆီသို့သဘောထားများ.
ဆက်စပ်: RealYBOP (scienceofarousal.com) "လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူပုဒ်မ"
အခြားအ RealYBOP အပိုင်း (ဆင်တူဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိ critiqued အားလုံး) ကလေ့လာမှုအများအပြားအပိုင်းရဲ့ခေါင်းစဉ် (လိင်ကျူးလွန်သူများ) နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိသည်။ မှနျးရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေကျနော်တို့ Deniers porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှု, အကြမ်းဖက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်အကြားမည်သည့်လင့်ခ် "တွင်မှအမှား" ရန်ကြိုးစားနေကြပါသည်ယူဆရမည်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုများလူထုကိုတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံတင်ပြနေစဉ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးအနည်းငယ်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်တော်မူလေ့လာမှုများပေါ်မှာမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ Over-မှီခိုဆွေးနွေးပါ။ ကျနော်တို့ကိုလည်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချန်လှပ်ကြောင်းမြောက်မြားစွာသက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည်။ နှစ်ဦးကိုမကြာသေးခင်ကဆောင်းပါးများကိုအများအပြားမဟာမိတ်အဖွဲ့ပြောနေတာအချက်များကိုဖြေရှင်း:
YBOP - မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားများမြင့်တက်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်လိုလားသူ porn ဝါဒဖြန့် (2018) လျစ်လျူရှု
FTND - Porn တကယ်ပဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Assault ၏နှုန်းကိုလျှော့ချရန်ပါသလား? (2018) (မြောက်မြားစွာ porn လေ့လာမှုများထုတ်ဝေထားပြီးသူတစ်ဦးပါမောက္ခကရေးသား)
porn ၏ရရှိမှုအတွက်ခန့်မှန်းခြေအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူလူမြိုးတစျမြိုး၏အစီရင်ခံစာမုဒိမ်းမှုနှုန်းပြောင်းလဲ correlating လေ့လာမှုများလက်တဆုပ်စာမှအနှစ်သာရမှာမဟာမိတ်အချက်များ။ အနည်းငယ်ကို select လုပ်ပါနိုင်ငံများတွင်ပါဝင်သောလေ့လာမှုများကိုးကားခြင်းအားဖြင့်, အမျိုးမျိုးသော Deniers တာဝန်မဲ့ညစ်ညမ်းနေတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာပိုပြီးသုံးစွဲနိုင်ဖြစ်လာအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှုန်းထားများတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာလျော့ကျကြောင်းပြောဆိုထားသည်ပါပြီ။ ကြှနျုပျတို့သညျဤအခိုင်အမာအတွက်တွင်းလာကြတယ်အောက်တွင်။
#1 - အဘယ်အရာကိုအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအ variable တွေကိုကော?
ဆက်စပ်မှုတန်းတူမဟုတ် causation ပါဘူး။ ရွေးချယ်ထားသောနိုင်ငံများအတွက်အစီရင်ခံမုဒိမ်းပြုကျင့်မှုများအတွက်ကျဆင်းမှုများအတွက်မြောက်မြားစွာကိုအခြား variable တွေကိုဖွယ်ရှိအကောင့်။ တစ်အခန်းကဏ္ဍကစားအရှိဆုံးသိသာ variable ကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများအတွက် (လူဦးရေရဲ့ 100K နှုန်း) မှာကျဆင်းမှုကြုံတွေ့ခဲ့ကြကြောင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများကျူးလွန်ရန်အများဆုံးဖွယ်ရှိအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စု (12-34) အသက်လူဦးရေအဖြစ်။ အဘို့အသင်ဂရပ်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်အမျှအမေရိကန်နှုန်းထားများ အားလုံး အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှု 1990 န်းကျင်သည်အထွတ်အထိပ်သို့, ပြီးတော့လာသောအခါအကြောင်းကို 2013, သည်အထိငြင်းဆန် မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားများမြင့်တက်စတင်။ မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားသည်ဤကာလအတွင်း (ထိုရာဇဝတ်မှုအမျိုးအစား) ကိုအနည်းဆုံးငြင်းဆိုခဲ့သည်သတိပြုပါရန်အရေးကြီး:
အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုအတွက်ကျဆင်းမှုလူဦးရေရဲ့အသက်အဖွဲ့ဝင်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုတိုးခြင်း, အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိအသက်အုပ်စုတွင်တစ်ဦးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်။ ဒါဟာလူဦးရေအချိုးအစားပြောင်းလဲမှုများစွာကို "ပထမဦးဆုံးလောက" လူအမျိုးမျိုးအတွက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်အားဖြင့်ပထမ, 1990 လူဦးရေဖြန့်ဖြူး။ အဆိုပါ 15-44 အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအတွင်းလူဦးရေသတိပြုပါ။
ထို့နောက် 2015 လူဦးရေဖြန့်ဖြူးအသက်အရွယ်အားဖြင့်။ အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိအသက်အုပ်စုများအတွက်ကျဆင်းမှုသတိထားမိခြင်း, အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲရှေးရှေးလူဦးရေရဲ့တစ်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတက်ပါစေ။
အထက်ပါလူဦးရေအချိုးအစားဆိုင်းအတွက်လျော့နည်းဘို့အကောင့်နိုင် အစီရင်ခံတင်ပြ မုဒိမ်းမှုနှုန်း, အဆိုပါနှုန်းထားများအမှန်တကယ်ငြင်းဆန်လျှင် (အရာပုံမှန်အား "လူဦးရေရဲ့တစ်ဦးလျှင် [X ကိုအရေအတွက်ကို]" အစီရင်ခံတင်ပြကြသည်) ။ သုတေသီ နီးလ် Malamuth မီလ်တန်စိန်ရဲ့စာတမ်းများ (၎င်းတို့၏မဆင်မခြင်တောင်းဆိုမှုများ၏အထောက်အထားအဖြစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့များကမွှမ်းတင်) ကိုအဓိက sexology listserve အပေါ်တုံ့ပြန်:
စုစုပေါင်းပြIssueနာ - အလိုလိုသိသည်မှာမီဒီယာအကြမ်းဖက်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုများအရအရေးကြီးသော“ အောက်ခြေလိုင်း” သည်“ အမှန်တကယ်ကမ္ဘာ” (ဥပမာအကြမ်းဖက်ရာဇ ၀ တ်မှုရာဇ ၀ တ်) တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာဖြစ်သည်ဟုအဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ငါထင်တာကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြgreatနာတွေကကြီးကျယ်ပြီးစုစုပေါင်းဒေတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကိုမဆိုဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကောက်ချက်ဆွဲရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ အောက်ပါအသင်းအဖွဲ့ကိုစဉ်းစားပါ - အမေရိကန်ရှိသေနတ်အရေအတွက်နှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုနှုန်း။
နောက်ဆောင်းပါး Pew တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း - တစ်ဝက်ကျော်အတိတ် 20 နှစ်များအတွင်းလူသတ်မှုနှုန်းဖြတ် (နယူးဂွန်ပိုင်ဆိုင်မှုမြင့်တက်နေစဉ်) လွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းအမေရိကန်၌သေနတ်များသိသိသာသာများပြားလာသည်နှင့်အမျှလူသတ်မှုနှုန်းမှာသိသိသာသာကျဆင်းလာသည်။ သေနတ်များကျယ်ပြန့်စွာရရှိနိုင်မှုသည်အမှန်တကယ်အလွန်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသတ်မှုလျှော့ချရေးကိုအထောက်အကူပြုခဲ့သည်ဟုအချို့သောသူများကထို့ကြောင့်ကောက်ချက်ချရန်မည်မျှလိုလိုလားလားရှိသနည်း။ Drew Kingston နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤစုစုပေါင်းပြissueနာကိုအောက်ပါအတိုင်းပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာဆွေးနွေးကြသည်။ Aggregate ဒေတာနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော် (2010) ၏လေ့လာမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ၏အရေးပါမှုနှင့်အတူပြဿနာများ.
Cross-ယဉ်ကျေးမှုစုစုပေါင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များနှင့်ရာဇဝတ်မှုအဆိုပါ (ဥပမာ, ကို Mickey စိန်ရဲ့အရေးကြီးသောအလုပ်) သာဒိန်းမတ်နှင့်ဂျပန်အတွက်, ငါ့ပညာအတတ်, ရယူခဲ့ကြသည်။ ထိုနှစ်နိုင်ငံများတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်လူသိများလိင်အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုအလွန်နိမ့်မှုနှုန်းရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဤနိုင်ငံများရှိ, (ယဉ်ကျေးမှုအတွင်းနှင့် Non-စစ်အတွင်းအခြေအနေများအတွက်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ကျူးလွန်ဘို့အန္တရာယ်နှင့်အတူအတော်လေးအနည်းငယ်ယောက်ျားရှိပါတယ်ကြောင်းကိုဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးအဖြစ်အချက်အလက်များ၏အခြားသတင်းရပ်ကွက်များကမျှော်လင့်ထားပေလိမ့်မည်။ စိန်နှင့်အပေါင်းအသင်းအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီအဖြစ်ထို့ကြောင့်မြစ်ဆုံမော်ဒယ်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်၏အခြေအနေတွင်ဤသို့သောနိုင်ငံများရှိကျနော်တို့ကတကယ်တော့, ညစ်ညမ်းတိုး၏ရရှိနိုင်မှုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အတွက်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမတိုးကြိုတင်ခန့်မှန်းမယ်လို့.
အလားတူအနိမ့်အန္တရာယ်ရှိသောငါတို့သည် USA တွင်လေ့လာခဲ့ကြသူလူတို့သညျပင်မြင့်မားသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူမည်သည့်တိုးလာ proclivity ပြပြီမဟုတ်ကြောင်း, သတိရပါ။ ငါမတိုင်မီမှတ်ချက်ချအဖြစ်အရေးပါစမ်းသပ်မှု, မာတင် Hald အဖြစ်နဲ့ကျွန်မပင်ဒိန်းမတ်အတွက်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုနှင့်အတူယောက်ျားတကယ်တော့ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်စစ်မှန်သော "တွင်နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ထိတွေ့တဲ့ function ကိုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများ၏လက်ခံ သာ. ကြီးမြတ်သဘောထားတွေကိုပြသခဲ့ပါကွောငျးတှေ့ခဲ့ပါ လောက "အသင်းအဖွဲ့ (2015 စာစောင်တွင်ကြည့်ပါ) ။ ငါကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုစသည်တို့ကိုမြင့်မားသော proclivity နှင့်ဆက်စပ်နေသော, sexism, အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများ၏လက်ခံသဘောထားတွေ, အမျိုးသမီးများဆီသို့ဦးတည်ရန်လိုမုန်းတီးမှုနှင့်အတူယောက်ျား၏အတော်လေးကြီးမားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူတိုင်းပြည်များတွင်ညစ်ညမ်း၏ရရှိမှုအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်လျှင်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိမြင်ရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ် ) ။
ထို့အပွငျလူသိများရာဇဝတ်မှုများ၏နှုန်းထားများ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ဆနျးစစျဖို့သာ "မှီခို variable ကို" မည်မဟုတ်ပါ။ ဂျပန်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနှုန်းမှာအတော်အတန်နည်းပါးသော်လည်း (ညအချိန်တွင်လမ်းလျှောက်လမ်းများတွင်အမျိုးသမီးများလုံခြုံမှုရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနည်းပါးခြင်း) အလွန်အမင်းနိမ့်ကျသော်လည်းအများအားဖြင့်တစ်ရက်တည်းတွင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအဓမ္မပြုကျင့်မှုနှုန်းသည်တစ်ရက်တည်းတွင်ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ (တရုတ်နိုင်ငံနန်ကင်းမြို့မှ) ။ ထို့ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုသည်အကြမ်းဖက်မှုကိုခွင့်ပြုလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အလားအလာကောင်းများသည်ထင်ရှားလာပေမည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသောလုပ်ရပ်များနှင့်သဘောထားများဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ အခြားဥပမာများရှိသည် (ဥပမာ - ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်၊ အထူးရထားစီးကားများကိုအမျိုးသမီးများအားယောက်ျားများကိုစပျစ်သီးကိုတိုက်ခြင်း)
အဆိုပါ "မှီခို Variable" Issue
ငါအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, မြစ်ဆုံမော်ဒယ်အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်အမျိုးသားများတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုပြင်းထန်တဲ့သဘောထားတွေနဲ့အပြုအမူတွေ, အထူးသဖြင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ လုံးဝနီးပါးကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ကြပါပြီသင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူအားမျှအစဉ်အဆက်စစ်ဆေးစီရင်ပါပြီ။ လူသိများရာဇဝတ်မှုနှုန်းထို့ကြောင့်အတန်ငယ်ဆီလျှော်ဖြစ်ကြသည်။ ပုံစံ၏သက်ဆိုင်မှုကိုဆွေးနွေးခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်များတစ်လျှောက်ပြစ်မှုထင်ရှားသူတစ် ဦး ချင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခါ“ ယေဘုယျဆန့်ကျင်ရေးလူမှုရေးဝိသေသလက္ခဏာများ” သည်အမျိုးသားများနှင့် ပို၍ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုထင်ရသည့်အတွက်၊ ။ ထိုပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံထားရသောအမျိုးသားများသည်မကြာခဏ“ အထူးကု” များမဟုတ်ကြသော်လည်းများစွာသောရာဇ ၀ တ်မှုများကျူးလွန်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသည့်လိင်ကျူးကျော်သူများ (အမျိုးသမီးများအပေါ်ရန်လိုမှု၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ခံသည့်သဘောထားစသည်ဖြင့်) ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွင်တသမတ်တည်းပြသခဲ့သည့်အတိုင်းအတာများကဤဒေသရှိလူသိများသောရာဇ ၀ တ်သားများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတစ်သမတ်တည်းမတွေ့ရပါ။ ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏နှုန်းထားများပြောင်းလဲမှုများသက်ဆိုင်ရာလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း, ဤအမှန်တကယ်တိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်အတွင်းသို့မဟုတ်ပဲ (ငါအဆုံးစွန်သောအရေးပါသည်ကိုခန့်မှန်းမယ်လို့) ဒီကိစ္စကိုပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုရှိခဲ့သည်ရှိမရှိလျော့နည်းသွားခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိဝေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းထံမှဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်း "စုစုပေါင်းပြဿနာ" ကိုပြောပြတယ်: ညစ်ညမ်း၏ရရှိမှုတစ်ချိန်တည်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာအသိပညာတိုးပွားစေဖို့ပိုပြီးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရှိခဲ့, နှစ်ပေါင်းများစွာသိသိသာသာတိုးတကျခဲ့ပေမယ့်။
ယင်းလူမျိုးထဲတွင်နီးပါးတိုင်းတက္ကသိုလ်, ယခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအမှုမဟုတျကွောငျးအရာတစ်ခုခုကိုအားလုံး freshman များအတွက်ကြားဝင်ပြဌာန်းထားသည်။ ယူဆသည့်အချို့မီဒီယာလွှမ်းမိုးမှုငါတို့သည်အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်သည်တစ်ချိန်တည်းတာမှာဖြစ်ပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ပြဿနာများ၏အများပြည်သူဆိုင်ရာအသိအမြင်အတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုးခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ကြားဝင် disentangle နိုငျသညျ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အချို့တိုးမြှင့ proclivity အထောက်အကူပြုပါမည်နည်း
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ variable ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောစာရင်းဇယားများ၏ (၌) တိကျမှန်ကန်မှုကိုဗဟိုပြု။
# ၂ - လေ့လာမှုများအရအဓမ္မပြုကျင့်မှုနှုန်းကိုမကြာခဏအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းမရှိသဖြင့်အမှန်တကယ်မြင့်တက်လာနိုင်သည်။
ဒါဟာအဓမ္မပြုကျင့်မှု၏ရာဇဝတ်မှုအစီရင်ခံအောက်မှာ-တသမတ်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ဦးအမေရိကန်ဥပဒေပါမောက္ခအားဖြင့်ဤစာတမ်းတွင်အကြံပြုအဖြစ်လှသောချွတ်ဖြစ်နိုင်သည်တောင်မှရဲကတင်ပြထားပါတယ်: မုဒိမ်းစာရင်းအင်းနှငျ့အတူအိပျဖို့ကိုဘယ်လို: အမေရိကားရဲ့ Hidden မုဒိမ်းအကျပ်အတည်း (2014) ။
အခြားအမြူနီစီပယ်ဖွယ်ရှိလုပ်မုဒိမ်းမှုတိုင်ကြားချက်၏စစ်မှန်တဲ့အရေအတွက်ကသတင်းပို့ပျက်ကွက်လျှင်, ဆုံးဖြတ်ရန်ဤဝတ္ထုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်း ကျွန်မတိုင်းပြည်အနှံ့ကရဲဌာနများအားဖြင့်မုဒိမ်းမှုဖြစ်စဉ်များ၏သိသာထင်ရှားသော undercounting ရှာပါ။ အဆိုပါရလဒ်များ 22 ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 210% မှာအနည်းဆုံး 100,000 ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လူဦးရေရဲဌာနများတာဝန်ရှိလေ့လာခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ 1995 မှ 2012 ကနေစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ undercounting ညွှန်ပြ၎င်းတို့၏မုဒိမ်းကျင့်ဒေတာအတွက်သိသိသာသာစာရင်းအင်းမူမမှန်ရှိသည်။ အထူးသ, undercounting တရားစီရင်မှု၏နံပါတ်လေ့လာဆယ်ရှစ်နှစ်စဉ်အတွင်း 61 ကျော်% တိုးပွားလာခဲ့သည်။
အလွန်အမင်းဆက်စပ်လူသတ်မှုနှုန်းထားများအနေဖြင့်ဒေတာများ imputing အားဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ undercounting ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဒေတာဆုံး, လေ့လာမှုရှေးရိုးစွဲ 796,213 အမျိုးသမီးသားကောင်များ၏အတင်းအဓမ္မအင်္ဂါဇာတ်မုဒိမ်းမှုတိုင်ကြားချက် 1,145,309 မှခန့်မှန်းတစ်နိုင်ငံလုံး 1995 မှ 2012 ထံမှတရားဝင်မှတ်တမ်းများမှပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ထို့ပြင်, တညျ့ဒေတာအချက်အလက်များ၏ခြေရာခံ 1930 စတင်ခဲ့ကတည်းကလေ့လာမှုကာလအတွင်းမုဒိမ်းမှုအမြင့်ဆုံးနှုန်းဆယ်ရှစ်မှတဆယ်ပါဝင်သောထုတ်ဖေါ်။ အဲဒီအစားအဓမ္မပြုကျင့်မှုအတွင်းကျယ်ပြန့်အစီရင်ခံ "ကြီးစွာသောကျဆင်းမှု" ကြုံနေရ၏, အမေရိကတစ်ဦးက hidden မုဒိမ်းမှုအကျပ်အတည်း၏အလယ်၌တည်ရှိ၏။
#3 - နိုင်ငံအများအပြားကဤတူညီသောကာလအတွင်းမုဒိမ်းမှုနှုန်းထားတစ်ခုတိုးအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။
ဥပမာအားဖြင့်, စပိန်နဲ့နော်ဝေကနေလေ့လာမှုများစိန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်များ (အပေါငျးတို့သမဟာမိတ်အဖွဲ့အားဖြင့်ချန်လှပ်) ဆန့်ကျင်ကြောင်းတွေ့ရှိချက်များကိုသတင်းပို့:
အင်တာနက်ကထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်သနည်း စပိန်ကနေလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား (2009) - ကောက်နုတ်ချက်: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကဲ့သို့သောအခြားအကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, တိုးပွါးနေစဉ်ကာလ 1998-2006 ကာလအတွင်းစပိန်၏နိုင်ငံတော်အပြည်ပြည်များအတွက် panel က data တွေကိုချဉ်းကပ်အသုံးပြုခြင်း, ရလဒ်များ, မုဒိမ်းမှုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအကြားတစ်ဦးအစားထိုးလည်းမရှိကဖော်ပြသည်။
broadband အင်တာနက်ကို: လိင်ရာဇဝတ်မှုမှတစ်ပြန်ကြားရေး Superhighway? (2013) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: အင်တာနက်ခလုတ်လိင်ရာဇဝတ်မှုကိုသုံးပါပါသလား ကျနော်တို့ဤမေးခွန်းကိုအပေါ်အလင်းကိုသွန်းဖို့ရာဇဝတ်မှုနှင့်အင်တာနက်မွေးစားပေါ်ထူးခြားတဲ့နျောဒေတာကိုသုံးပါ။ ကန့်သတ်ရန်ပုံငွေနှင့်အတူတစ်ဦးကအများပိုင်ပရိုဂရမျ 2000-2008 အတွက်ဘရော့ဘန်း access ကိုရမှတ်ထွက်လှိမ့်, နှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက် plausibly exogenous အပြောင်းအလဲပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာပ variable တွေကိုခန့်မှန်းအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးအဓမ္မပြုကျင့်မှုနှစ်ခုလုံးအစီရင်ခံစာများ, စွဲချက်များနှင့်ယုံကြည်မှုများအတွက်သိသိသာသာတိုးများနှင့်အခြားလိင်ပြစ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်လိင်ရာဇဝတ်မှု propensity အပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်ဖြစ်နိုင်သည်ညစ်ညမ်း၏တိုးမြှင့်စားသုံးမှု၏ရလဒ်အဖြစ်, အပြုသဘောနှင့် Non-မှုမရှိခြင်းကိုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
တစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ မုဒိမ်းမှုနှုန်း၏ဤစားပွဲပေါ်မှာ သငျတို့သ (တိကျမှုစာရင်းဇယားစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရည်ညွှန်း) မျှကိုမှန်ကန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပုံစံရှိတယ်မြင်လိမ့်မည်။ အရာတစ်ခုမှာအချို့အဘို့ဖြစ်၏, စိန်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုနော်ဝေ, ဆွီဒင်, ကော့စတာရီ, နယူးဇီလန်, အိုက်စလန်, အီတလီ, အာဂျင်တီးနား, ပေါ်တူဂီ, အဖြစ် porn နှင့်မုဒိမ်းမှုနှုန်း၏ရရှိမှုနှစ်ဦးစလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းတိုးမြှင့်ရာမြောက်မြားစွာ "ခေတ်သစ်" နိုင်ငံချန်လှပ်
#4 - ၏နှုန်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများအမေရိကန်နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထ (Pornhub နှစ်ခုအကြီးမားဆုံးအသုံးပြုသူများသည်) ။
အဆိုအရ FBI ကဖြန့်ချိသစ်ကိုစာရင်းဇယား (ကြည့်ရှု သရုပ်ပြဇယား), လူဦးရေရဲ့ 100,000 နှုန်းမုဒိမ်းမှုအရေအတွက်က () တဖြည်းဖြည်း 2014-2016 (stats ရရှိနိုင်နေသောများအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က) မှတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်မှာတော့ 138,045 လိင်ပြစ်မှုများစက်တင်ဘာလ, 23 ရှေ့အပု 12 လအတွင်းထ 2017% ရှိခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးထိုတူညီသောကာလအတွင်းမှာ:
ED နှုန်းထားများ 40 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အတဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်ပါပြီနှင့်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအလုံးစုံနှုန်းထားများအတိုင်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းခဲ့ရပြီ ကလေးမွေးဖွားနှုန်း အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ။
#5–Porn porn အသုံးပြုသူများကိုအကဲဖြတ်သည့်လေ့လာမှုများသည် porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၊ ကျူးကျော်မှုနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုမှု (စာပေနှင့် meta-analysis ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ) အကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသသည်။
အဲဒီအစားဘယ်လိုသက်ဆိုင်ရာ variable တွေကိုအဘို့အထိန်းချုပ်ထားကြောင်းအမှန်တကယ် porn အသုံးပြုသူများကိုအပေါ်လေ့လာမှုများအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ကို select လုပ်ပါနိုင်ငံများတွင်အပေါ်အလွန်အမင်းသံသယရှိစုစုပေါင်းလေ့လာမှုများ, လော သည်အခြားမဟာမိတ်အဖွဲ့အပိုင်းနှင့်အတူအမျှဒီတစ်ခုစာပေနှင့် Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏သက်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းချန်လှပ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ (ထိုအပိုင်း၏အဆုံးမှာကျွန်တော်ကိုလည်းမဟာမိတ်အဖွဲ့အားဖြင့်ချန်လှပ်မြောက်မြားစွာတစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများသည်။ )
ညစ်ညမ်း II ၏သက်ရောက်မှုများကိုစုစည်းတင်ပြရန် Meta-analysis သည်: ထိတွေ့ပြီးနောက်မှထုတ်ပြန်သော (1995) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
30 လေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်ကောက်ယူ, စီမံခန့်ခွဲမှုအခွအေန (လိင်စိတ်နိုးထ၏အဆင့်မီအမျက်ဒေါသ၏အဆငျ့, ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးစဉ်းစား, ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအောက်တွင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူအပေါ်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ရန်, 1971-1985 ထုတ်ဝေခဲ့သည်, S က၏လိင်, ကျူးကျော်များ၏ပစ်မှတ်၏ကျားမနှင့်ပစ္စည်းသိရှိစေရန်ဖို့အသုံးပြုအလတ်စား) ။
ရလဒ်များလတ်ဗလာနောက်ဆက်တွဲပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူ induces, အကြမ်းမဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ပစ္စည်း၏စားသုံးမှုရန်လိုသည့်အပြုအမူတိုးပွါးကြောင်းညွှန်ပြခြင်း, အကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏မီဒီယာပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုအကြမ်းမဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေထက်ပိုပြီးကျူးကျော် generate။ အဘယ်သူမျှမကအခြားက Moderator variable ကိုတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းတွေ့ရှိချက်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: အဲဒီမှာယုံကြည်စိတ်ချရသောဆိုးကျိုးများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါတို့သည်သူတို့နားလည်နိုင်သလဲ (2000)- ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
အချို့သောမကြာသေးမီဝေဖန်မှုတုံ့ပြန်တှငျကြှနျုပျတို့ (က) ထိုမှတ်ချက်အအတွက်တင်ဆက်သည့်အငြင်းပွားမှုများနှင့်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ခ) စမ်းသပ်နှင့်သဘာဝသုတေသနအတော်ကြာ metaanalytic အကျဉ်းချုပ်များ၏တွေ့ရှိချက်များပေါင်းစပ်ခြင်း, (ဂ) တစ်ဦးကြီးများကိုယ်စားလှယ်နမူနာအပေါ်စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ အားလုံးသုံးခြေလှမ်းများအထူးသဖြင့်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းအဘို့နှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များအတွက်မြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာယောက်ျားအဘို့, မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားယုံကြည်စိတ်ချရသောအသင်းအဖွဲ့များနှင့်လိင်ပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေ၏တည်ရှိမှုကိုထောကျပံ့။ ကျနော်တို့အတော်လေးပြင်းထန်တဲ့ယောက်ျားအနက်ကိုဘော်ပြခြင်းနှင့်အတူတူပင်ညစ်ညမ်းတုံ့ပြန်လမ်း nonaggressive ယောက်ျား၏ထိုမှသည်လက်ရှိ Cross-ယဉ်ကျေးမှုသုတေသနနှင့်အတူမုဒိန်းမှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့် nonrapists နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူလေ့လာဆန်းစစ်ပေါင်းစည်းကူညီပေးသည်တဲ့ရှုထောင့်ကွဲပြားစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်ထုတ်ဝေသုတေသနတစ်ဦးက Meta-analysis သည် (2000) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
46 ၏ Meta-analysis သည်လေ့လာမှုများထုတ်ဝေသောမုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီနှင့် ပတ်သက်. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviancy, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. သဘောထားများနှင့်သဘောထားများအပေါ်ညစ်ညမ်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအများစုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြုသောအမှုခံခဲ့ရ (39; 85%) နှင့် 1962 ထံမှ 1995 ဖို့နေ့စွဲအတွက်အရွယ်ရှိ, 35% နှင့်အတူ (ဎ = 16) 1990 နှင့် 1995 နှင့် 33% (ဎ = 15) အကြားထုတ်ဝေ 1978 အကြားနှင့် 1983 ။ 12,323 လူများတစ်ဦးကစုစုပေါင်းနမူနာအရွယ်အစားပစ္စုပ္ပန် Meta-analysis သည်ဖွဲ့စည်း။ effect အရွယ်အစား (ဃ) တစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသောလေ့လာမှုများများအတွက်မှီခို variable တွေကိုတစ်ခုချင်းစီအပေါ်တွက်ချက်တစ်ဦးစုစုပေါင်းနမူနာ 12 ၏အရွယ်အစားသို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကာဆနျ့ကငျြဘသို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတစ်စုပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။
ပျမ်းမျှ unweighted နှင့်အလေးချိန် d's ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviancy (.68 နှင့် .65), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန် (.67 နှင့် .46), ရငျးနှီးဆက်ဆံရေး (.83 နှင့် .40), နှင့်မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီ (.74 နှင့် .64) အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေအထောက်အထားပေး ညစ်ညမ်းထိတွေ့သည့်အခါအနုတ်လက္ခဏာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်ကြားက link ကိုအတည်ပြု။ ဤရလဒ်သည်ဤဒေသရှိသုတေသနညစ်ညမ်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်မိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာတခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုကျော်လွန်ရွှေ့နိုင်သောအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူအတွက်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကို (2007) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
Weaver (1993) အဘို့, အငြင်းပွားဖွယ်ရာညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏အကျိုးဆက်များသုံးခုသီအိုရီကနေအဓိကအားထား:
သင်ယူမှုတစ်ပုံစံအဖြစ်လိင်၏ကိုယ်စားပြုမှု ရှည်လျားသော (လွတ်လပ်) ငြင်းပယ်သို့မဟုတ်ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်အဘယ်အရာနှင့်ဆက်စပ်သောလူမှုတရားသေအယူဝါဒ၏အမြင်တွင် - တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းညစ်ညမ်းမှတဆင့်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးသည့်တားစီးအပြစ်ရှိတယ်ပြူရီတန်သဘောထားတွေ, လိင်အပေါ် fixation, (Feshbach, 1955) .2 Kutchinsky (1991) ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုများလျှော့ချပေးခဲ့ခြင်းနှင့်အရှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများနှုန်းလျော့နည်းစေကြောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆို့ရှင်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်အမှုဆောင်ပိုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ခဲ့သည့်အခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးနှုန်းကျဆင်းသွားကြောင်းဖော်ပြထားသည်, ဒီစိတ်ကူးကထပ်လောင်းပြောဆိုသည်။ အလွန်အမင်း Debate သော်လည်း, အဘယျသို့ကဤရဝုဏ်ကိုဆိုလိုသည်ကြောင်းညစ်ညမ်းရေးသားသူသည်နှင့်အညီ, အသရုပ်ဆောင်ထွက် offsets သောသင်ယူမှုတစ်ပုံစံကမ်းလှမ်းသည်။ ဤဆင်ခြေအလားအလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု (; Vadas, 2005 McGowan, 2005) ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချတစ်လမ်းအဖြစ်ပြည့်တန်ဆာများ၏လွတ်လပ်၏အကြံပြုချက်ကိုထောက်ခံအားပေးသူများအားဖြင့်လည်းအသုံးပြုပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအငြင်းအခုန်ဖြစ်တယ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်၏လမ်းလူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ဆိုလိုတယ်ထိခိုက်စေ။ အောက်ခြေလိုင်းကလူကုန်စည်မဟုတ်ဖြစ်၏
လူတစ်ဦး၏လူဇာတ်ဖျက်ခြင်း, ရှေ့သီအိုရီမတူဘဲ၌၎င်း, ဘယ်မှာညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးတွေ (ဂျင်ဆင်, 1996; Stoller, 1991) ၏ပထမဦးဆုံးနှင့်အဓိကယောက်ျားရဲ့ misogynistic ပုံရိပ်ကိုဖြစ်၏
ပုံတစ်ပုံမှတဆင့် Desensitization ကြောင်းအဖြစ်မှန်နှင့်အညီမဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လူမှုဆက်ဆံရေးအပေါ်အလွန်အမင်းလျှော့ချရေးအမြင်ကိုပေးသည်။ ရုပ်ပုံသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၊ ထပ်ခါတလဲလဲပြောခြင်းနှင့်လက်တွေ့မကျသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာမြင်ကွင်းများထက်မပိုသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကပုံပျက်ယွင်းမှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်တွေ့တွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်ပါ။ သူများသည်ပုံပျက်ပြောင်းလဲနေသောနှင့်ငြိမ် criminogenic variable တွေကိုအားဖြင့်ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုများပိုမိုပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှမကြာခဏထိတွေ့ခြင်းကသူ၏တန်ဖိုးများနှင့်အပြုအမူများကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်လူကိုထိခိုက်စေသည်။ (Bushman, 2005; Carich & Calder, 2003; Jansen, Linz, Mulac, & Imrich, 1997; Malamuth, Haber, & Feshbach, 1980; Padgett) & Brislin-Slutz, 1989; Silbert & Pines, 1984; Wilson က Colvin, & စမစ်, 2002; Winick & အီဗန်, 1996; Zillmann & Weaver, 1999) ။
ညစ်ညမ်းပစ္စည်းမှရေရှည်ထိတွေ့မှု: အတိုချုပ်ထဲမှာ, သုတေသနရှင်းရှင်းလင်းလင်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးအကြားတိုက်ရိုက်အကြောင်းမရှိ-and effect ကို link ကိုပြသပေမယ့်တကယ်တော့အများအပြားသုတေသီများတဦးတည်းအရာအပေါ်သဘောတူဖြစ်နေဆဲမရှိသေးပေယနေ့အထိထွက်သယ်ဆောင် တစ်ဦးချင်းစီ disinhibit မှခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် Linz၊ Donnerstein နှင့် Penrod တို့ကအတည်ပြုခဲ့ပြီးထိုနှစ်တွင်ပင် Sapolsky၊ ၁၉၈၅ တွင်ကယ်လီ၊ ၁၉၈၉ တွင် Marshall နှင့် Zillmann၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် Cramer, McFarlane, Parker, Soeken, Silva, & Reel နှင့် Thornhill နှင့်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၁ တွင် Palmer နှင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် Apanovitch, Hobfoll နှင့် Salovey တို့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့အလုပျ၏အခြေခံတွင်ဤသုတေသီအားလုံးညစ်ညမ်းစေရန်ရေရှည်ထိတွေ့မှုတစ်ခုစွဲလမ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးသူတို့ကျူးလွန်ပြုမူသောအမှု၌အကွမျးဖကျ minimize လုပ်ဖို့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဦးဆောင်ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုထောက်ပံ့သဘောထားတွေ: nonexperimental လေ့လာမှုများ (2010) တွင်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ဆွေးနွေးရန် - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
Meta-analysis သည် nonexperimental လေ့လာမှုများယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်၎င်းတို့၏သဘောထားများအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု supporting အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ထင်ရှားရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ Meta-analysis သည်ယခင်ကထုတ်ဝေ Meta-analysis သည်နှင့်အတူပြဿနာများတညျ့နှင့်ပိုပြီးမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များကဆက်ပြောသည်။ အစောပိုင်း Meta-analysis သည်မတူဘဲ, လက်ရှိရလဒ်တွေကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် nonexperimental လေ့လာမှုများအတွက်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုထောက်ပံ့သဘောထားတွေအကြားတစ်ဦးခြုံငုံသိသိသာသာအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့ပြသခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်သောဆက်ဆံရေးမျိုးကိုလည်းသိသိသာသာဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်ပေမယ့်အပြင်, ထိုကဲ့သို့သောသဘောထားတွေ, အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူထက်လိင်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားပတျသကျမှတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုဧရိယာ၌ nonexperimental လေ့လာမှုများကနေကောက်ချက်တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ရှိသော counterpart စမ်းသပ်လေ့လာမှုသူတို့နှင့်အတူအပြည့်အဝကိုက်ညီဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ရန်လိုသဘောထားအပေါ်စာပေအတွက်ဒုက္ခစိတ်တိုးပွားဖြစ်ထငျရှားသောအရာကိုဖြေရှင်း။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ကျူးကျော်အပေါ်ခြုံငုံစာပေများအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
လိင်ဖောက်ပြန်တဲ့စတင်ခြင်းနှင့်ကြိမ်နှုန်းအပေါ်ဘဝလမျးစဉျကိုကျော်လိင်စက်မှုလုပ်ငန်းထိတွေ့မှု (2014) - ကောက်နှုတ်ချက်:
သုတေသနဖောက်ပြန်တဲ့၏အတိုင်းအတာအပေါ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော်လုံးဝနီးပါးမျှအလုပ်ကတခြားလိင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများလိင်ရာဇဝတ်မှုကိုထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ extension ကို, အဲဒီထိတွေ့မှုများ၏စုပေါင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမသိနိုင်ပါဘူး။ လူမှုသင်ယူမှုသီအိုရီထိတွေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သူများကိုချဲ့ထွင်သင့်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။
နောက်ကြောင်းပြန် longitudinal အချက်အလက်ပေါ်ဆွဲကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထိတွေ့မှုစတင်ခြင်းတစ်ဦးနုပျိုအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိစမ်းသပ်ရန်; ငါတို့သည်လည်းလူကြီးထိတွေ့ဖောက်ပြန်တဲ့ပိုမိုကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့ဆက်စပ်ခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်။
တွေ့ရှိချက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုထိတွေ့မှုအများစုအမျိုးအစားများအဖြစ်စုစုပေါင်းထိတွေ့မှုစတင်ခြင်းတစ်ခုအစောပိုင်းကအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ဖော်ပြသည်။ လူကြီးစဉ်အတွင်းထိတွေ့မှုလည်းလိင်ဖောက်ပြန်တဲ့သူတစ်ဦးစုစုပေါင်းတိုးနဲ့ဆက်စပ်ပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအမျိုးအစား "ပေါ်တွင်မှီခိုခဲ့ကြခဲ့သည်။"
တစ်ဦးက Meta-ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အထွေထွေအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်တမန်တော်များ၏ analysis လူဦးရေလေ့လာရေး (2015)။ - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
စမ်းသပ်လေ့လာမှု meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်သဘောထားများအပေါ်သက်ရောက်မှုတွေ့ပြီ။ စားသုံးမှုသဘာဝလေ့လာမှုများအတွက်ပြင်းထန်တဲ့သဘောထားတွေနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်အဲဒီညစ်ညမ်းကိုလည်းတွေ့ရှိရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးမရှိ, Meta-analysis သည်အလုပ်၏ဤခန္ဓာကိုယ်လှုံ့ဆျောမှုဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရှင်းထားပါတယ်: ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်ကျူးလွန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းပါသလား 22 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ7လေ့လာမှုများဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ စားသုံးမှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းတို့တွင်အများနှင့် Cross-Section နှင့် longitudinal လေ့လာမှုများအတွက်နိုင်ငံတကာကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျူးကျော်များနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။ နှစ်ဦးစလုံးသိသိသာသာခဲ့ကြသည်ပေမယ့်အသင်းအဖွဲ့များ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ထက်နှုတ်များအတွက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များ၏ယေဘုယျပုံစံအကြမ်းဖက်အကြောင်းအရာတစ်ခုပိုမိုဆိုးဝါးအချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။
မြီးကောင်ပေါက်နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: သုတေသန 20 နှစ်များတစ်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်မှန်းချက်အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ကြောင်းပင်ကိုယ်မူလသုတေသန systematize ဖို့ဖြစ်တယ် 1995 နှင့် 2015 အကြား peer-ပြန်လည်သုံးသပ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဂျာနယ်များ ယင်းပျံ့နှံ့, ခန့်မှန်းနှင့်ညစ်ညမ်း၏မြီးကောင်ပေါက် '' အသုံးပြုမှုသက်ရောက်မှုတွေပေါ်မှာ။ ဒါဟာသုတေသနမြီးကောင်ပေါက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုပြသပေမယ့်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုအလွန်ကွဲပြား။ ပိုပြီးမကြာခဏညစ်ညမ်းတဲ့မြီးကောင်ပေါက်, တစ်ဦးထက်ပိုသောအဆင့်မြင့် pubertal ဇာတ်စင်မှာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေနေသူအထီး ရှိ. , အားနည်းသို့မဟုတ်စိတ်ပူပန်မိသားစုဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုအားကောင်းကျား-ကျပုံစံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့တော်မှာခဲ့သည်။ ဒါဟာအစနှစ်ဦးစလုံးကျူးလွန်ခြင်းနှင့်သားကောင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ထိုလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ဖြစ်ပျက်မှု, ပေါ့ပေါ့လိင်အပြုအမူနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်အတွေ့အကြုံ, နှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့သလိုပဲ.
ဆယ်ကျော်သက် (2017) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ၏ပေါ်ထွန်းရေးခန့်မှန်း - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
အလားအလာသြဇာဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်ချိန်ညှိပြီးနောက်, မိဘ၏ဇနီးယောင်္ကျားအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းစေရန်လက်ရှိထိတွေ့မှုမှကြိုတင်ထိတွေ့မှုတစ်ခုချင်းစီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန် SV ကျူးလွန်-ကြိုးစားခဲ့မုဒိမ်းမှုပေါ်ပေါက်လာအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းများအတွက်ချွင်းချက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိရန်လိုသည့်အပြုအမူကိုလည်းသိသိသာသာမုဒိမ်းမှု မှလွဲ. ပထမဦးဆုံး SV ကျူးလွန်အမျိုးအစားအားလုံးကိုများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိသားကောင်များ၏ယခင်သားကောင်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများအတွက်ဆိုသော်ငြားတဦးတည်းရဲ့ပထမဦးဆုံး SV ကျူးလွန်၏ဒါ့အပြင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ခဲ့ကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြား SV ကျူးလွန်အမျိုးမျိုး၏ဤအမျိုးသားရေး longitudinal လေ့လာမှု၌, တွေ့ရှိချက်များကိုပစ်မှတ်ထားခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအများအပြားပျော့အချက်များ, လူငယ်များသည် '' အိမ်တွေမှာကြမ်းတမ်းမိဘများကလုပ်ပါတယ်နှင့်လည်းအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်အားဖြည့်လျက်ရှိကြောင်းကြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြမ်းဖက်မှုများအထူးသဖြင့် script များအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုချိန်းတွေ့ခြင်း (DV) နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု (SV) သည်ပြန့်နှံ့သောပြproblemsနာများဖြစ်သည်။ ကြီးထွားလာနေသောစာပေများအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာ (SEM) နှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မီဒီယာ (SVM) သည် DV နှင့် SV တို့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ SEM နှင့် SVM နှင့် DV နှင့် SV တို့၏သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်ထိတွေ့မှုအပေါ်စနစ်တကျနှင့်ပြည့်စုံသောစာပေပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်ပြီးသူနမူနာများကို အသုံးပြု၍ လေ့လာမှု ၄၃ ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးစုပေါင်းတွေ့ရှိချက်များက -
(3) SEM နှင့် SVM သည်အမျိုးသား DV နှင့် SV တို့၏သဘောထားနှင့်အပြုအမူများကိုအမျိုးသမီးများနှင့် DV နှင့် SV တို့၏သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများထက်ပိုမိုပြင်းထန်စွာသက်ရောက်သည်။ နှင့်
(4) DV နှင့် SV နှင့်ပတ်သက်သောရှိပြီးသားသဘောထားများနှင့်မီဒီယာ ဦး စားပေးမှုများသည် SEM နှင့် SVM ထိတွေ့မှုနှင့် DV နှင့် SV တို့၏သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုထိန်းညှိပေးသည်။
ကျနော်တို့ porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ / ကျူးကျော်၏အဓိက sexology listserve ဆွေးနွေးမှုကနေအခြားပို့စ်ကောက်ချက်ချ။ သင်မြင်ပါလိမ့်မယ်သကဲ့သို့, စာရေးဆရာအလွန်လိုလားတဲ့ porn (နှင့်တစ်ဦးပါရဂူဘွဲ့လိင်သုတေသီ) ဖြစ်ပါသည်:
ငါဖန်ဆင်းအထွေထွေကြေညာချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များအတွက်အဖြစ်အခြားရလဒ်ကို variable တွေကိုရပ်တည်မထင်ပါတယ်။ ဒီနရောမှာတစ်ဦးအပြင်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် nonsexual ပြင်းထန်တဲ့သဘောထားတွေနဲ့အပြုအမူတွေကိုအမြိုးမြိုးဆက်စပ် porn ပိုမိုထိတွေ့ဖေါ်ပြခြင်းဆက်စပ်မှုအချက်အလက်များ, ငါတို့သည်လည်းရှိသည်:
b) ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုကိုတိုးပွားစေသည်ကိုပြသည့်စမ်းသပ်ချက်အချက်အလက်များ (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်လှုပ်ခြင်းများကဲ့သို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်း) (Allen, D'Alessio, & Brezgel, 33 တွင်လေ့လာချက် ၃၃ ခု);
c) ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုပြသသည့်စမ်းသပ်ချက်အချက်အလက်များသည်လိင်အကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ခံသည့်သဘောထားများတိုးပွားလာသည် (လူ့အသိုက်အ ၀ န်းအကြမ်းဖက်မှုကိုလက်ခံခြင်း၊ မုဒိမ်းမှုလက်ခံခြင်းနှင့်လိင်စော်ကားနှောင့်ယှက်ခြင်းများ) (Emmers, Gebhardt, & Giery, 16 တွင်လေ့လာချက် ၁၆ ခု);
d) Time 1 တွင်ပိုမိုကြည့်ရှုခြင်းကိုပိုမိုကြည့်ရှုခြင်းသည်အချိန် (၂) တွင်အစစ်အမှန်ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသော longitudinal အထောက်အထား (Wright, Tokunaga, & Kraus,2တွင်လေ့လာချက် ၅ ခု) အပါအ ၀ င်၊ လိင်အကြမ်းဖက်ခံရခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းစသည်.
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုထောကျအထားအလငျး၌ပြုလုပ် porn နှင့်ကျူးကျော်ကြားရှိအစစ်အမှန်ဘဝကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လင့်များတစ်နည်းနည်းနဲ့အစစ်အမှန်များနှင့်လုံးဝလည်းမရှိခဲ့ချေမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုငြင်းခုန်ဖို့, ငါ့အမြင်အတွက်တကယ်ခက်ခဲများနှင့်မိုဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သံသယတစ်ခုထိုးဆက်လက်တည်ရှိသင့်ကြောင်း, ပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးသုတေသနပြုလေ့လာမှုများအစဉ်အမြဲပြုသောအမှုခံရဖို့ဆက်လက်သင့်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါအလောင်းအစားရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်ဆိုပါကအခုအချိန်မှာ, ငါအဲဒီမှာတချို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအပေါ်မှာငါ့ပိုက်ဆံသွင်းထားချင်ပါတယ်သည်ဟုဆိုရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ် အနုတ်လက္ခဏာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အပေါ်ညစ်ညမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, ထိုအကျိုးသက်ရောက်မှုဖွယ်ရှိက) အတော်လေးသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူခ) ကလူတစ်ဦးက high-အန္တရာယ်အုပ်စုကန့်သတ်ခြင်း, အခြားသူများထက် porn (အကြမ်းဖက်) ၏အချို့အမျိုးအစားများဘို့ဂ) ပိုပြီးသိသာ (အကြမ်းမဖက်ပေမယ့်ပုံမှန် ခေတ်ရေစီးကြောင်း porn) နှင့်ညစ်ညမ်း (အမျိုးသမီး, queer) ၏မရှိသေးပါကအခြားအမျိုးအစားများဘို့လည်းမရှိခဲ့ချေ။
ဟုတ်ပါတယ်, စမ်းသပ်မဟုတ်သလို longitudinal မဒေတာတကကမ်ဘာပျေါတှငျကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အဆုံးအဖြတ်များအတွက်စုံလင်ပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်က psyche သုတေသန၏အခြားဒေသများမှကြွလာသောအခါသူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆိုလိုကြောင်းသဘောတူရန်ပုံရသည်။ သူတို့ကအမူအကျင့်ရလဒ်များအမြိုးမြိုးအဘို့အကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ထူထောင်ဘို့ငါတို့ကိုရွှေစံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ကြသည်။ ကသုတေသနဒီတစ်ခုဧရိယာမှကြွလာသောအခါငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်သံသယရှိသနည်း ဒါကြောင့်မည်သည့်အနှုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်မဟုတ် porn ဘို့ငါတို့အလိုဆန္ဒများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါသောကြောင့်? ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါ (ငါတကယ်လုပ်ပေး) အဖြစ်တာသင်တို့ရှိသမျှကိုပြုသကဲ့သို့, porn ကိုချစ်ပေမယ့်ငါတွေ့ရှိချက်မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်သက်သေပြ၏မြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းမှ porn ကိုင်ပြီးတရားမျှတမနိုင်။ ဤသူကားငါသည်ဤတွေ့ရှိချက်ငြင်းပယ်သို့မဟုတ်မသိကျိုးကျွံပြု anti-porn ရူးဆိတ်စစ်သည်များမှအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်မျက်စိကန်းသောကြောင့်အကြောင်းကိုအယူဝါဒကိုပြောကြသောအခါ, ငါသည်အဓိပ်ပာယျကဘာလဲ ... ။
... ..I ကျနော်တို့ကတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကျနော်တို့သူတို့ထံမှဆွဲအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြားဝင်များအတွက်သက်ရောက်မှုတွေကိုအသုံးပြုဖို့ကိုမည်သို့အတွက် Anti-porn နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုတူညီဖို့မဆိုလိုခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်သို့ငါဟုခံခဲ့ရသူတို့ကလုပ်ပေးရုံနဲ့တူ, ငါတို့သာမြင်ချင်သောအရာကိုကြည့်ဖို့တချို့တော်တော်ခိုင်မာတဲ့အတည်ပြုချက်ကိုဘက်လိုက်မှုအလုပ်သမားခံရဖို့ပုံရသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် mounting စောင့်ရှောက်သောသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပင်မျက်စိကန်းမျက်စိလှည့်အားဖြင့်ကျနော်တို့ရည်မှန်းချက်အမှန်တရား-ရှာဖွေနေသူသောကြောင့်ယုံကြည်ကိုးစားမှုအလျှော့နေကြသည်, ကြှနျုပျတို့ porn ကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ဖြေရှင်းချက်မပေးကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားကိုအမှန်တကယ်ကမ္ဘာပြောင်းလဲမှုအကောင်အထည်အဖော်အပေါ်ရှိသည်နိုင်သက်ရောက်မှုကန့်သတ်ထားပါသည်။ အထောက်အထားကမထောက်ပံ့သော ( "porn မရှိကြင်နာမည်သူမဆိုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်") နည်းတူအယူဝါဒအပုတာ Crazy အဖြစ်မောင်းနှင်အဖြစ်, ကိုယျ့ကိုယျကိုလျော့နည်းသက်ဆိုင်ရာများနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာပယ်ချအောင်နေတစ်ခုအစွန်းရောက်အနေအထားကိုယူပြီးအားဖြင့် သည်အခြားအစွန်းရောက်အနေအထားကို ( "အားလုံး porn ကချောင်းမြောင်းသောသူမည်သည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်တိုးပွါး") ။
တနည်းကား, ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မရကြဘူး: ငါ porn ကိုချစ်တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအချိန်ကစောင့်ကြည့်, ထိုသို့ပိတ်ပင်ဖို့သုညအလိုဆန္ဒရှိသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုများမှရက်နေ့တွင်မဟာမိတ်ဂရုတစိုက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်အရာကိုဥပမာကို ရွေးချယ်. , များပြားပို။
realyourbrainonporn (pornographyresearch.com)“ Sex Offender Section” တွင်ဖော်ပြထားသောချယ်ရီရွေးချယ်သည့်စာတမ်းများ
Burton, DL, Leibowitz, GS, & Howard, အေ (2010) ။ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုအပေါ်လူငယ်ဆိုးသွမ်း၏ရာဇဝတ်မှုအမျိုးအစားအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်: ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုဝိသေသလက္ခဏာများ 1 မှထိတွေ့မှုများအကြားဆက်ဆံရေး၏မရှိခြင်း။ Forensic သူနာပြုဂျာနယ်,6(3), 121-129 ။ ဝဘ်မှ Link ကို
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: အဆိုပါမဟာမိတ်အကျဉ်းချုပ်အနည်းငယ်အလွန်အရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက် omits: porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည် နှစ်ခုလုံး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူနှင့် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ။ ယင်းစိတ္တဇမှ:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု nonsexual အလွဲသုံးစားပြုသူများထက်ညစ်ညမ်းဖို့ပိုအကျူးနဲ့ post-10 (အသက်နှစ်) ထိတွေ့မှုအစီရင်ခံတင်ပြ။ သို့သော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများအတွက်, ထိတွေ့မှုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခံရသူသူတို့ရဲ့သတင်းပေးပို့အရေအတွက်, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုပြင်းထန်မှုရန်, အလွဲသုံးစားစတင်ခဲ့ရာမှာအသက်အရွယ်မှဆက်နွယ်နေကြောင်းမပေးပါ။ pre-10 ထိတွေ့ subscale အုပ်စုလိင်စော်ကား, နှင့်မာန်ထိတွေ့ subscale မုဒိမ်းမှုဒါမှမဟုတ်လူငယ်အသုံးပြုသောအင်အားဒီဂရီမှ arousal ဖြစ်စေဆက်နွယ်နေကြောင်းမခံခဲ့ရသားသမီးများ၏အရေအတွက်နှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်ခဲ့ပေ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထိတွေ့မှုသိသိသာသာလေ့လာမှုအတွက် nonsexual ရာဇဝတ်မှုရမှတ်အပေါငျးတို့သဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။
Kutchinsky, ခ (1991) ။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှု: သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်? ညစ်ညမ်းအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါသည်အဘယ်မှာရှိလေးနိုင်ငံများတွင်ရာဇဝတ်မှုဒေတာကနေသက်သေအထောက်အထား။ ဥပဒေနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ ဝဘ်မှ Link ကို
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: အဆိုပါ 1980 ရဲ့ထံမှ pre-အင်တာနက်ဒေတာ။ မီလ်တန်စိန်ရဲ့ရှေးခယျြထားနိုင်ငံများနှင့်အမျှဤလူမြိုး-ကျယ်ပြန့်ဒေတာများကိုပါဝငျသညျ။ နိဒါန်းတွင်အမှာစကားပြောကြားသည်။
Rasmussen, KR, & Kohut, တီ (2019) ။ ဘာသာရေးတက်ရောက်သူညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အမျိုးသမီးဆီသို့သဘောထားတွေအကြားဆက်သွယ်မှုများပုံမှန်ပါသလား? လိင်သုတေသန 56 (1) ၏ဂျာနယ်, 38-49. ဝဘ်မှ Link ကို
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တေလာ Kohut အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ မိမိအလေ့လာမှုအဖြစ်ကပိုကိုးကားငွေကြေးဖောင်းပွမှု လိင်မှားယွင်းမှုနှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ အခြားသောကောဟတ်လေ့လာမှုများကဲ့သို့ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) သူသည်ဘာသာရေးအမျိုးသမီးများ (ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနည်းသော) သည်သူ၏“ သာတူညီမျှသောသဘောထားများ” ထက်နိမ့်ကျအောင်သေချာစေရန်စံနှုန်းများကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။သာတူညီမျှ " as သာ:
မည်သို့ပင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဘာသာရေးလူဦးရေဝေးဂိုးသွင်းမယ်လို့ကြည့်ဖို့လွယ်ကူပါတယ် အနိမ့် တေလာ Kohut ရဲ့ 2-တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း "သာတူညီမျှ" အကဲဖြတ်ပေါ်မှာ။
ဤတွင်သော့ချက်င်: ပိုပြီးလစ်ဘရယ်ဖြစ်လေ့ရသောလောကလူဦးရေ, ဘာသာရေးလူဦးရေထက်ဝေးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းမှာ porn ကိုအသုံးပြုပါ။ သာထိုအ2စံရွေးချယ်ရာတွင်နှင့်အဆုံးမဲ့သည်အခြား variable တွေကိုလျစ်လျူရှုအသုံးပြုပုံတေလာ Kohut "ဟုသူကပါဝငျသောအရာကိုသူ့ရဲ့လေ့လာမှုရဲ့မဟာဗျူဟာကျကျရွေးချယ်ထားသည့်စံနှင့်အတူ correlating (လောကလူဦးရေအတွက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သော) porn အသုံးပြုမှုကိုအတူတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့သိတယ်သာတူညီမျှ"(ဘာသာရေးလူဦးရေအတွက်အနိမ့်) ။ ထိုအခါ Kohut ကအားလုံးကိုပတ်ချာလည်မယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Kristen N. Jozkowski, Tiffany L. Marcantonio, Kelley E. Rhoads, Sasha Canan, Mary E. Hunt & Malachi Willis (2019) အဓိကရုပ်ရှင်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်နှင့်ငြင်းဆိုဆက်သွယ်ရေး၏တစ်ဦးကအကြောင်းအရာအားသုံးသပ်ခြင်း, လိင်သုတေသန Doi ၏ဂျာနယ်: 10.1080 / 00224499.2019.1595503 ဝဘ်မှ Link ကို
ပိုမိုကိုးကားငွေဖောင်းပွမှု။ ဒီလေ့လာမှုကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ရွေးချယ်ထားသည့်ရုပ်ရှင်ကားများသည် X-rated မဟုတ်ပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်အများစုမှာ PG-13 ဖြစ်သည်။ ကောင်းပါတယ်, မဟာမိတ်။
Kutchinsky, ခ (1992) ။ ညစ်ညမ်းစာပေသုတေသန၏နိုင်ငံရေး။ ဥပဒေ & Soc'y ဗျာ, 26, 447 ။ ဝဘ်မှ Link ကို
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု။ တစ်ခုအက်ဆေးအကြောင်းကိုတစ်ခုဆီလျှော် 1992 ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်။ ကိုးကားငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုပါ။
Mellor, အီး, & Duff, အက်စ် (2019) ။တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်: ညစ်ညမ်းနှင့်ယောက်ျားပေါင်းအတွက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူအကြားဆက်ဆံရေးများအသုံးပြုမှု။ ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်အပြုအမူ. ဝဘ်မှ Link ကို
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: အဆိုပါမဟာမိတ်အကျဉ်းချုပ်မျှမျှတတတိကျမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့သညျမိမိပြန်လည်သုံးသပ်များအတွက် 21 သက်ဆိုင်ရာစာတမ်းများကိုသာ 157 လက်ခံ၏စာရေးဆရာရဲ့ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းထုတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သံသယမှတပါးအခြားသောစာပေပြန်လည်သုံးသပ်အတူတူကောက်ရောက်ရှိကြောင်းကိုတကယ်တော့ကထောက်ခံကြသည်။ ထို့အပြင် 21 အများစုကလေးကလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအပေါ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, ကလေးမကလေးသည်, ဒါမှမဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအပေါ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပါဝင်ပတ်သက်စာတမ်းများကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မီလ်တန်စိန်ရဲ့လေ့လာမှုများအပေါ်မှတ်ချက်ပေး, သုတေသီနီးလ် Malamuth ကလေးညစ်ညမ်းသုံးပြီး pedophiles ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းသုံးပြီး Non-pedophiles ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်မည်အကြောင်းမှတ်ချက်ပြု:
ဒါဟာကို Mickey စိန်ရဲ့အလုပ်နှင့်ကို virtual ညစ်ညမ်းဖြစ်နိုင်ခြေများကအကြံပြုအဖြစ်, အထူးသဖြင့်ကလေးညစ်ညမ်းနှင့် ဆက်စပ်. , ထိတွေ့မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကအလွန်ကွဲပြား (နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်) နှင့်အတူအချို့သောအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ "လူမျိုးကွဲ" ရှိစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားရန်ကျိုးနပ်သည်။ ကျနော်တို့ကိုအောက်ပါဆောင်းပါး၌ဤခေါင်းစဉ်ကိုဆှေးနှေးပြီ Malamuth, N. & Huppin, အမ် (2007) ။ ပုံသေကလေးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပေါ်တွင်မျဉ်းဆွဲခြင်း - သုတေသနအထောက်အထားနှင့်အညီဥပဒေကိုယူဆောင်လာခြင်း.
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် meta-analaysis သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့လာမှုတိုင်းကိုချန်လှပ်ထားခဲ့သည်။ ရလဒ်သည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်ရလဒ် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းကိုကြည့်ပါ) ။
ဖာဂူဆန်, CJ, & Hartley, RD (2009) ။အဆိုပါအပျြောအပါး ... damnable ကုန်ကျစရိတ် ?: မုဒိမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဏပါပဲ။ ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်အပြုအမူ, 14 (5), 323-329 ။ ဝဘ်မှ Link ကို
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: အဆိုပါမဟာမိတ်အကျဉ်းချုပ်တိကျ - "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အဓမ္မပြုကျင့်မှုအဘို့အသားကောင်များနှုန်းထားများညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုသရုပ်ပြပါ။ တခြားနိုင်ငံကနေဒေတာများကိုဆင်တူဆက်ဆံရေးအကြံပြုခဲ့ကြသည်။သို့ရာတွင်လေ့လာမှုသည်လက်တဆုပ်စာနိုင်ငံများမှမုဒိမ်းမှုနှုန်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှုန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်စုစည်းထားသည့်အချက်အလက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤလေ့လာမှုအမျိုးအစားများတွင်ကြီးမားသောအားနည်းချက်များကိုနိဒါန်းတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမီလ်တန်စိန်လေ့လာမှုကိုလည်းပါ ၀ င်သည်။
မှတ်ချက်: အပြင်းအထန်အဆိုပါ ICD-11 ထဲကအင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder ကိုစောင့်ရှောက်ရန်မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်အနှစ်, ဖာဂူဆန်, အင်တာနက်စွဲလမ်း၏အယူအဆတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (သူ 2019 အတွက်တဦးတည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အဆိုပါ ICD-11 မွေးစားသည့်အခါကား, မိမိမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအများအပြားမျက်နှာစာပေါ်ဆက်လက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ) တကယ်တော့ဖာဂူဆန်နှင့်နီကိုးလ် Prause ခုနှစ်တွင် အဓိကစက္ကူပေါ်မှာ Co-စာရေးဆရာများအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုစီရင်ချက်ကိုပယ်ရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ (သူတို့အခိုင်အမာအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်စာတမ်းများတစ်စီးရီးအတွက် debunked ခဲ့ကြသည် ၏ဤပြဿနာ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်.)
စိန်, အမ်, Jozifkova, အီး, & Weiss, P. (2011) ။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ရာဇ ၀ တ်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 40 (5), 1037-1043. ဝဘ်မှ Link ကို
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: အဆိုပါမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အကျဉ်းချုပ်တိကျမှုတစ်ခုဖြစ်သည်: "ကလေးညစ်ညမ်း၏အပိုင်တရားမဝင်မဟုတ်ခဲ့သည့်ကာလအတွင်းတစ်ဦးကအချိန်ကြာမြင့်စွာကြားကာလ ... ကလေးကလိင်အလွဲသုံးစားမှုဖြစ်ပွားမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းပြသခဲ့သည်။ " ဒီနေရာတွင် (တုံ့ပြန်မှု Malamuth ဖြစ်ပါသည်, မေးခွန်းဖြစ်ပါသည် "သင်ရေးသားခဲ့သူ") Malamuth တစ်ခုပညာသင်နှစ် sexology listserve အပေါ်တစ်ဦးဆွေးနွေးမှုအတွက်စိန်ရဲ့လေ့လာမှုအကြောင်းကိုဆိုပါတယ်ဘာလဲ:
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပြစ်မှု: ငါလူအတော်များများဟာဆက်စပ်မှုတိုင်းပြည်ကျယ်ပြန့်သုတေသန porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှုကိုပြသထားပါတယ်သောအထင်အမြင်ရှိပုံပေါ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ ငါသည်ဤမှာအားလုံးမှန်သည်မယုံကြည်ကြဘူး။ သငျသညျမီလ်တန်စိန်၏ကိုယ်ပိုင် site ကိုမှသွားလျှင်သင်ဒေတာကလေးကလိင်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအကြားကွဲကွာနေသည်တစ်ချိန်က porn ကိုပိုမိုရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်အဖြစ်ကအဆုံးစွန်သောအလျော့မပေးခဲ့ပါဘူး (သို့သော်လည်းမတိုးခဲ့ဘူး) ထိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင်သင်ဘယ်မှာမှာအနည်းဆုံးလက်ဝါးကပ်တိုင်-section နိုင်ငံများတွင်ဥပမာရှိပါတယ်သိမြင်နိုင်သည်, နှစ်ခုအကြားတစ်ဦးမြင့်မားသောအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြောင်းညွှန်ပြအဲဒီမှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လည်းမရှိ,
"ပါပူဝါနယူးဂီနီ, ဂူဂဲလ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရသိရသည်ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးညစ်ညမ်း-အစွဲအလမ်းနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ PNG ထက်နည်း 8 လူဦးရေသန်းရှိပါတယ် လူများနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအနိမ့်မှုနှုန်း, ဒါပေမယ့်နိုင်ငံ၏နှိုင်းယှဉ်စကားတို့ကို "porn" နှင့် "ညစ်ညမ်း" အတွက်ရှာဖွေမှုများအကြီးမြတ်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ် စုစုပေါင်းရှာဖွေမှုများကို။ The Lancet ထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခု Bougainville ၏ PNG ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းယောက်ျား၏ 59 ရာခိုင်နှုန်းကရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်များနှင့် 41 သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်မဟုတ်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဂူဂဲလ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း: ထို့အပြင်ဆောင်းပါး '' ညစ်ညမ်း '' ရှာဖွေနေကြောင်းထိပ်တန်းတစ်ဆယ်နိုင်ငံတွေဆိုတာကိုပြသ
1 ။ ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ
2 ။ ဇင်ဘာဘွေ
3 ။ ကင်ညာ
4 ။ ဘော့ဆွာနာ
5 ။ ဇမ်ဘီယာ
6 ။ အီသီယိုးပီး
7 ။ မာလာဝီ
8 ။ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ
9 ။ ဖီဂျီ
10 ။ နိုင်ဂျီးရီးယား
ငါသည်ဤသူတို့တွင်လည်းအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြားပုံစံများမြင့်မားမှုနှုန်းနှင့်အတူနိုင်ငံပေါင်းဖြစ်မည်အကြောင်းခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။ ငါညစ်ညမ်းငြင်းခုံမဟုတ်ဘူး "ဟုအဆိုပါ" သို့မဟုတ်ပင် "a" ကိုအကြောင်းမရှိဘဲဘုံယုံကြည်ချက်ကမ္ဘာ့ကျယ်ပြန့်ကြောင်းသို့မဟုတ် longitudinal တစ်ခုပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအကြားသရုပ်ပြခဲ့တာကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဒါဟာမြစ်ဆုံမော်ဒယ်, အထူးသဖြင့်ရန်လိုမုန်းတီးမှုပုလ်၏အန္တရာယ်အချက်များဘို့ကစာရင်းအင်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်အသင်းအဖွဲ့မှာ Cross-ယဉ်ကျေးမှုအကွညျ့ရှုလေ့လာမှုတစ်ခုလုပ်ဆောင်သွားရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်။ ငါစွန့်စားမှုမြင့်မားသူတို့နိုင်ငံတွေအတွက် (အထူးသဖြင့်ယောက်ျားယေဘုယျအားထက်သာစစ်ဆေးစီရင်ရာဇဝတ်မှုများအကြား) porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းပေမယ်မှာနေသောအတော်လေးအနည်းငယ်ယောက်ျားနှင့်အတူနိုင်ငံများတွင်မျှဆက်စပ်မှုဒါမှမဟုတ်ပြောင်းပြန်တဦးတည်းမယ်လို့ အဆိုပါမြစ်ဆုံမော်ဒယ်အဆိုအရအန္တရာယ်။
သင် wrote: လူ့အဖွဲ့အစည်းအဆင့်မှာ, ညစ်ညမ်းအမှန်ပင်စစ်ဆေးစီရင်လိင်ရာဇဝတ်မှုများအပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ
RESPONSE: ငါမတိုင်မီညွှန်ပြသည့်အတိုင်း, ငါစိန်နှင့်ဆက်စပ်ဒေတာကိုမကြာခဏယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ယူဆအရာကိုထုတ်ဖေါ်မယုံကြည်ကြဘူး။ စိန်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသူတို့ကိုယ်သူတို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြသကဲ့သို့, data ကိုညစ်ညမ်းရရှိနိုင်မှုနှင့်ကလေးလိင်အလွဲသုံးစားမှုများအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုပြသ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအကြားအဘယ်သူမျှမကအလားတူသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ရှိပါသည်။ အဓမ္မပြုကျင့်မှု၏အကြောင်းရင်းများနှင့်ခလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှု vs. မုဒိန်းသမား၏ဝိသေသလက္ခဏာများမကြာခဏအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပြီးအတူတကွ lumped မရသင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အချက်အလက်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တိုင်းပြည်အဆင့်တွင်ဆက်စပ်မှုရှိပြီး“ စုစုပေါင်းပြproblemနာ” ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း၏ဆက်စပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတိကြီးစွာထားရန်လိုအပ်သည် (Kingston & Malamuth, 2011) ။
ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်နိဂုံးချုပ်နိုင်သည်မှာလေ့လာထားသောနိုင်ငံများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပိုမိုများပြားစွာရရှိစေရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဥပဒေများကိုပြောင်းလဲသောအခါယေဘုယျအားဖြင့်မုဒိမ်းမှုတိုးပွားလာခြင်းမရှိပါ။ ဒါ့အပြင်အဲဒါကိုစိန်နှင့်အပေါင်းအသင်းများကလေ့လာခဲ့သည့်နိုင်ငံများအားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ကျူးလွန်ဘို့အတော်လေးမြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာနေသောအတော်လေးအနည်းငယ်ယောက်ျားရှိစေခြင်းငှါသူမြားဖွစျဖို့ပေါ်လာပုံဆိုတာကိုသတိရဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ငါအရင်ကခရိုအေးရှားမျှော်ကြည့်ဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအမြန် Google Search 94% အမျိုးသမီးတွေအတူတကွမိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာအကြမ်းဖက်မှုများသည်းခံသင့်ကြောင်းအဆိုပါကြေညာချက်နှင့်အတူသဘောမတူဘူးကြောင်းဖော်ပြသည်။
သင် wrote: ပေမယ့်, ထိုလူ့အဖွဲ့အစည်းကျယ်ပြန့်သုံးစွဲနိုင်အတွင်းအန္တရာယ်အချက်များတစ်မြစ်ဆုံကြောင့်ညစ်ညမ်းလိင်အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်တိုးပွါးဘယ်မှာ porn ထိတွေ့ယောက်ျား, ရှိပါတယ်
RESPONSE: သင်ရေးသားခဲ့ရာတွေနဲ့အကြီးအကျယ်တသမတ်တည်းပေမယ့်အတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနား phrased: သည် "သော့" အန္တရာယ်အချက်များပေါ်တွင်အတော်လေးမြင့်မားသူအထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်လူတို့သညျအဘို့, data ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ညစ်ညမ်း၏ "လေးလံသော" ကိုအသုံးပြုခြင်းလိင်အကြမ်းဖက်သဘောထားများနှင့်အမူအကျင့်စိတျကိုတိုးပွါးစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။
သင် wrote: porn access ကိုခွင့်ပြုတော်မူသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်ထားစဉ်များတွင်ပါဝင်စေခြင်းငှါ, အပိုကြီးတဲ့လူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးလျော့နည်းသွားအန္တရာယ်၏ပိုကြီးတဲ့ငွေပမာဏအဘို့အသေးငယ်တဲ့အုပ်စုတွင်တိုးမြှင့်စွန့်စားမှု၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုလကျခံ
RESPONSE: ငါကျနော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့သူတို့ကိုငါတို့တွင် Contextual ကွဲပြားခြားနားမှုကိုယူပြီးမပါဘဲလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယေဘုယျအောင်သတိထားဖြစ်ဖို့ရှိသည်ထင်ပါတယ်။ ငါဒိန်းမတ် vs. ဆော်ဒီအာရေဗျညစ်ညမ်းဥပဒေများပြောင်းလဲနေတဲ့အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးဆက်များခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ငါစစ်ဆေးစီရင်လိင်ပြစ်မှုများ, အထူးသဖြင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအပေါ်သာသို့မဟုတ်အဓိကအားအာရုံစိုက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းငှါထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တခြားနေရာရေးထားပြီအဖြစ်ဥပမာ, ဂျပန်မကြာခဏညစ်ညမ်း ( "အကြမ်းဖက်" porn အပါအဝင်) ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားယခုနှင့်သမိုင်းကြောင်းအလွန်နိမ့်များမှာဘယ်မှာနိုင်ငံတွေ၏အဓိကသာဓကတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။
ဂျပန်သည်အမှန်တကယ်တွင်အမျိုးသမီးများအပေါ်“ အုပ်စုအတွင်း” အကြမ်းဖက်မှုကိုပြင်းထန်စွာလူမှုရေးအရတားဆီးပိတ်ပင်ထားသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အခြားအလားအလာရှိသည့်သရုပ်ဖော်ချက်များကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ -“ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လူစည်ကားသောရထားများပျံတက်ခြင်းသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုကျိုမက်ထရိုပိုလစ်တန်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် East Japan မီးရထားကုမ္ပဏီတို့၏စစ်တမ်းအရ၎င်းတို့၏အသက် ၂၀ နှင့် ၃၀ အတွင်းအမျိုးသမီးခရီးသည် ၃ ပုံ ၂ ပုံမှာသူတို့ရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ မီးရထားပေါ်ကရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုများကြောင့်အများစုသည်မကြာခဏနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရသည်။ ” အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုသည်းခံခဲ့ပြီးသောအခါ, အလွန်မြင့်မားတဲ့ခဲ့ပြီး (ဥပမာ Chang, * Nanking ၏မုဒိမ်း * ကြည့်ပါ) ။ ငါသေချာပေါက်သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်နှင့်အတူ disagreeing မဟုတ်ပေမယ့်ငါကြှနျုပျတို့သညျဤအချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောနိဂုံးချုပ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်သေချာမဖွစျ၏။
ရိုးရှင်းစွာထားပါ, (အခြားနိုင်ငံများမှရာပေါင်းများစွာလျစ်လျူရှုစဉ်) နိုင်ငံအများလက်တဆုပ်စာကနေ (ဖော်ပြခဲ့သည်လိင်ရာဇဝတ်မှုများနှင့်ခန့်မှန်းခြေ porn ရရှိနိုင်မှု) တစ်နိုင်ငံလုံးအချက်အလက်များ၏နှစ်စုံအပေါ်မှီခိုပိုမိုညစ်ညမ်းချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နည်းပါးလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများမှဦးဆောင်မယ့်ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံရန်, မ စစ်မှန်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များအကြားပျံသန်း။
Goldstein, အမ်, ကန့်, အိပ်ချ်, Judd, အယ်လ်, ဆန်, C တို့, & အစိမ်းရောင်, R. (1971) ။အဓမ္မပြုကျင့်, pedophiles, လိင်တူဆက်ဆံ, တယောက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု: ညစ်ညမ်းနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 1 (1), 1-15. ဝဘ်မှ Link ကို
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: အပေါ် "လိင်ရုပ်ရှင်" ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်အရွယ်ရောက်ယောက်ျားအပေါ်တစ်ဦးက 1971 လေ့လာမှု (ဖြစ်နိုင် 1920's-40 ရဲ့တှငျမှေးဖှား) မှတ်ချက် "deviants ။ " - လေ့လာမှုခွဲခြားလိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်ဘာသာရပ်များအဖြစ်များပြားလှသောပိုပြီးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော "deviants ။ " ), အ 1971 လေ့လာမှုတန်ပြန်ကြောင်းတွေ့ရှိချက်များကိုသတင်းပို့ပါ။
Hald, GM, & Malamuth, NN (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 44 (1), 99-109. ဝဘ်မှ Link ကို
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: porn အသုံးပြုမှုအချို့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမျိုးအစားများအကြားအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုထောက်ပံ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆထောက်ပံ့ပေးသည်။ အဆိုပါစိတ္တဇ:
ကျပန်းစမ်းသပ်ဒီဇိုင်း 200 ဒိန်းမတ်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအသုံးပြုခြင်း, လေ့လာမှုဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက်မှုထောက်ပံ့သဘောထားတွေအပေါ်အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်းနေတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဉာဉျဆိုး (ညီညှတျ), အတိတ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်စမ်းသပ်ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး အမြိုးသမီးမြား (ASV) ။ ကျနော်တို့နှငျ့ညီညှတျနှင့်အတိတ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်၏အောက်ခြေအဆင့်သိသိသာသာ ASV ခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ညစ်ညမ်းမှစမ်းသပ်ထိတွေ့ ASV တိုးလာပေမယ့်မှသာညီညှတျအတွက်အနိမ့်လူတို့တွင်။ ဒီအကြားဆက်ဆံရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအဘို့အဆင်သင့်, သိသိသာသာလိင်စိတ်နိုးထလိင်စိတ်လှုပ်ရှားခံစား၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အကဲဖြတ်ရည်ညွှန်းနှင့်အတူလိင်စိတ်နိုးထကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်လိင်နှိုးဆွခံနေရနှင့်ဆက်စပ်နှင့် / သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အာရုံ။ တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု၏အရေးပါမှုတွေကိုများတွင်ရလဒ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် priming သက်ရောက်မှုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ hierarchical မြစ်ဆုံမော်ဒယ်နှင့်မီဒီယာစာပေထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
မှတ်ချက်: "နှငျ့ညီညှတျ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်" နဲ့ယောက်ျားလူဦးရေရဲ့တစ်ဦးသိသိသာသာရာခိုင်နှုန်းကိုကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ်။
Bauserman, R. (1996) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်ညစ်ညမ်း: ဆက်စပ်မှုသုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ အခြေခံပညာနှင့်အသုံးချလူမှုစိတ်ပညာ, 18 (4), 405-427 ။ ဝဘ်မှ Link ကို
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း: အဆိုပါမဟာမိတ်အဖွဲ့ (ကမျဉ်းသားရဲ့) ကိုစိတ္တဇသူတို့ရဲ့ကောက်နုတ်ချက်ကနေ key ကိုဝါကျထွက် left:
လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူပုံမှန်အား nonoffenders နှိုင်းယှဉ်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ညစ်ညမ်းမှအစောပိုင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပုံမှန်မဟုတ်သောထိတွေ့မှုမရှိကြပါဘူး။ သို့သော်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးလူနည်းစု၎င်းတို့၏ပြစ်မှုများအတွက်ညစ်ညမ်း၏လက်ရှိအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့ပါ။ တွေ့ရှိချက်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများလိင်ပြစ်မှုများကိုတိုက်ရိုက်အထောက်အကူပြုသောအမြင်နှင့်အတူမညစ်ညမ်းတဲ့လူမှုရေးသင်ယူမှုအမြင်နှင့်ကိုက်ညီသော်လည်း, ။ လိင်ပြစ်မှုများကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွေ့အကြုံများနှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်သက်ဆိုင်သောနောက်ခံအမျိုးအစားများကိုအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုတပြင်လုံးကိုအများကြီး porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့အကြားလင့်များသတင်းပို့ပြုပါသောနောက်ဆုံး 25 နှစ်များတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။
အောက်ပါလေ့လာမှုများကညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခြင်း၊ Alliance သည် ၄ ​​င်း၏“ သုတေသနစာမျက်နှာ” မှအသီးအသီးကိုချန်လှပ်ထားသည်။
အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျူးကျော်အပေါ် erotica ၏လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ဆိုးကျိုးများ (1978)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစစ်တမ်း: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းနှင့်သားကောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးတစ်ဦးကသုတေသနတူရိယာ (1982)
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ရှိရာသို့ သွား. နှင့်မုဒိမ်း၏အသေးအဖွဲ (1982)
အမျိုးသမီးဆီသို့ညစ်ညမ်း, အလိုလိုနှင့် nonpermissive တွေကိုနှင့်အထီးကျူးကျော်ရန် exposure (1983)
မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီထဲမှာယုံကြည်ချက်အပေါ်ရန်လိုညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများ: တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု (1985)
မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု: အမျိုးသမီးများနေ့ဆန့်ကျင်ရန်လိုအပေါ်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှု (1986)
မုဒိန်းသမား, ကလေးဗလက္နှင့် nonoffenders အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအသုံးပြုမှု (1988)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် Self-အစီရင်ခံဖြစ်နိုင်ခြေကို (1988)
ညစ်ညမ်းစောစောထိတွေ့မှု (1992) ၏ function ကိုအဖြစ်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးသဘောထားများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်
လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ, ကလေးဗလက္နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြားတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုပုံစံများ (1993)
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: မုဒိမ်းမှုနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှု proclivity နှင့်အတူအကြမ်းဖက်များနှင့်အကြမ်းမဖက်ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု၏အသင်း (1993)
လိင်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, Anti-အမျိုးသမီးများနေ့သဘောထားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: တစ်ဦးကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ် (1993)
အမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု: သီအိုရီလေ့ကျင့်ဖို့ (1994)
viewer ရဲ့အဓမ္မပြုကျင့်မှုဒဏ္ဍာရီယုံကြည်ချက်အပျေါမှာအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများ: ဂျပန်ယောက်ျား၏လေ့လာမှုတစ်ခု (1994)
မုဒိမ်းမှု (1995) ဆီသို့သဘောထားတွေအပေါ်ရိုက်ကူးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုမှထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများ
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ကလေးဗလက္ (1997) အကြားဆက်ဆံရေး
အမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု: သီအိုရီလေ့ကျင့်ဖို့ (1998)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ etiology အတွက်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကို (2001)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏ကော်မရှင် (2004) စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းများအသုံးပြုမှု
စကားမလုံလောကျ Are လိုက်တဲ့အခါ: ချိုးဖောက်မှုများအမျိုးသမီးများအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (2004) သည်အသုံးပြုရှာရန်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်၏ယောက်ျားရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကို: အဆိုပါအရက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2006)
အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုကနေရရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးမုဒိမ်းကျင့်-ဒဏ္ဍာရီအရတော့ယုံကြည်ချက်: အရက်နှင့်လိင်စိတ်နိုးထသက်ရောက်မှု (2006)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခန့်မှန်း: ယေဘုယျနှင့်တိကျသောအန္တရာယ်အချက်များ (2007) ၏အခြေအနေတွင်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။
အကြမ်းဖက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2008) တွင်ထိန်းနေရန်လိင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအမျိုးသားအသုံးပြုမှုချိတ်ဆက်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူများကုသခြင်းတို့အတွက်သီအိုရီပတ်သ က်. နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2009): ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ၏အရေးပါမှု
အင်တာနက်ကထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်သနည်း စပိန်ကနေလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား (2009)
ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုအပေါ်လူငယ်ဆိုးသွမ်း၏ရာဇဝတ်မှုအမျိုးအစားအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုဝိသေသလက္ခဏာများ (2010) မှထိတွေ့မှုများအကြားဆက်ဆံရေး၏မရှိခြင်း
Aggregate ဒေတာနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏လေ့လာမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ၏အရေးပါမှုနှင့်အတူပြဿနာများ: စိန်, Jozifkova နှင့် Weiss အပေါ်မှတ်ချက် (2010)
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ antecedents နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ် (2011): လိင်သားကောင်နှင့် nonsexually သားကောင်အထီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများအကြားကွာခြားချက်များ
တစ်ကိုယ်စားလှယ်နမူနာ (2012) တွင်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်နှင့်အမျိုးသားများရဲ့လက်ခံမှုအတွက်ညစ်ညမ်း, တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ
အမျိုးသားတက်ကြွအပြုအမူသဘောထားတွေကို (2012) ရက်နေ့တွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံထိတွေ့၏ဆိုးကျိုးများ
အပိုင်း II ကို: ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ antecedents နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ၏နောက်ထပ်အုပ်စုတစုနှိုင်းယှဉ် (2012): လိင်သားကောင်နှင့် nonsexually သားကောင်အထီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုများနှင့်ဆိုးသွမ်းလူငယ်များအကြားခြားနားချက်များ
broadband အင်တာနက်ကို: လိင်ရာဇဝတ်မှုမှတစ်ပြန်ကြားရေး Superhighway? (2013)
ညစ်ညမ်း, အရက်နှင့်အမျိုးသားလိင် Dominic (2014)
အဆိုပါ Revised လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစစ်တမ်းအသုံးပြုခြင်း Battery ကိုအမျိုးသမီးများနှင့် Revised ပဋိပက္ခ Tactics ကြေးခွံ (2014) များထဲတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအတွေ့အကြုံများဖမ်းယူ
အရွယ်ရောက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသမီးအလွဲသုံးမှုဝေဖန် Criminological နားလည်သဘောပေါက်: သုတေသနနှင့်သီအိုရီအတွက်နယူးတိုးတက်ရေးပါတီလမ်းညွှန်များ (2015)
ယောက်ျားရဲ့အ Objectifying မီဒီယာစားသုံးမှု, အမြိုးသမီးမြား၏ Objectification နှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ (2015) ၏အထောက်အပံ့သဘောထားများကို
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆန့်ကျင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သူနဲ့ဆက်စပ်သလဲ? re-ဆန်းစစ်တတိယ variable ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအတူမြစ်ဆုံမော်ဒယ် (2015)
time-ကွဲပြားအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အမျိုးသားကောလိပ်ကျောင်းသားများ (2015) တွေထဲမှာလိင်မှထုတ်ပြန်သောကျူးလွန်သူ
အဝတ်အချည်းစည်းကျူးကျော်: တစ်အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာပေါ်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်အလေ့အကျင့် (2016)
အမျိုးသမီးလိင်အကျပ်ကိုင် (2017) ၏ခန့်မှန်းအဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုတစ်ခုစာမေးပွဲ
တစ်မဂ္ဂဇင်းသန်းကိုပိုမို: အိမ်အပြန်မှာ '' Mags, မုဒိမ်း Myth ဟာလက်ခံနှင့်မုဒိမ်း Proclivity (2017) အကြားတွင်အဆိုပါ Links များ Exploring
ပုလ်စံချိန်စံညွှန်း, သက်တူရွယ်တူအုပ်စု, ညစ်ညမ်း, Facebook, နှင့်အမျိုးသမီး၏ယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification (2017)
ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအကြောင်းပြောနေတာငါ့ကိုလိင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ကိစ္စအပြုအမူ (2017) တားဆီးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်စော်ကားသူကိုလူငယ်များကကူညီပေးခဲ့ကြလိမ့်မယ်
Porn ပြဿနာမှ Porn အသုံးပြုမှုမှသည် Threshold Crossing: လိင် Coercive အပြုအမူများခန့်မှန်းအဖြစ် Porn သုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ပုံစံများ (2017)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုမည်သို့တိုင်းတာသက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှု (2017)
ယင်းသီအိုရီ Gap ပေါင်းကူး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင် (2018) အကြားဆက်ဆံရေးကိုရှငျးပွပါရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Script သီအိုရီကိုသုံးပြီး
မိုဇမ်ဘစ်အမျိုးသမီးဆီသို့ဦးတည်ယောက်ျားရဲ့လိင် Sadism: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု? (2018)
အမြိုးသမီးမြားအပျေါအတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အမျိုးသားများတွင်ခေါ်ဆောင်သွားညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှလျော့နည်းသွားစေ၏စမ်းသပ်သက်ရောက်မှု: objectification, sexism, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း (2018)
"မီးလောင်စာထည့်သွင်းခြင်း"? Non-ဖှအရွယ်ရောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ကလေးညစ်ညမ်းတိုးအန္တရာယ်မှထိတွေ့ပါသလား (2018)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူမှ Exposure: ကိုရီးယားမြီးကောင်ပေါက်အကြားလူမှုရေးအထောက်အပံ့အကာအကွယ်အခန်းကဏ္ဍ (2018)
Battery ကိုကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ (2018) တွင်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Intimate Partner အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူ
Pedophilic တမန်တော်ဆန့်ကျင်အကာအကွယ်အချက်များ (2019)
ဗိုလ်မှူး YouTube ကိုပြတ်တောက် (2019) မှညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအထောက်အထား
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု: Tirunelveli ခရိုင် (2019) တွင်အိမ်ထောင်သည်ကျေးလက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာ
အမြိုးသမီးမြားအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့် Narcissistic နှင့် Histrionic ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Disorder စရိုက်လက္ခဏာအဆိုပါသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (2019)
သင်မပြနိုင်သည့်အချိန်…အဓိက YouTube ပြတ်တောက်မှုများ၏အဓမ္မပြုကျင့်မှုများ (2019) အပေါ်သက်ရောက်မှု
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသလား။ အမျိုးသမီးများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုအပေါ်သဘောထားများ၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ role (၂၀၁၉၉)
အမျိုးသားရွယ်တူချင်းထောက်ခံမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု - အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းအားကစားများတွင်ပါ ၀ င်မှုနှင့်လိင်မတော်မတရားပြုမူမှုအကြားဆက်စပ်မှု (၂၀၂၀)
နိုင်ငံတော်အဆင့်သေဆုံးမှုအားလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ဂူဂဲလ်မှညစ်ညမ်းစာပေများရှာဖွေခြင်း - ဘဝသမိုင်းသီအိုရီမှထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း (၂၀၂၀)
အမျိုးသမီးများညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစားသုံးမှု၊ အရက်သေစာသောက်စားခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာသားကောင်များ (၂၀၂၀)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များ။ ။ (၂၀၂၁) ကောလိပ်အမျိုးသားများနမူနာပုံစံဖြင့်မြစ်ဆုံပုံစံ၏မဏ္pillိုင်လေးခုကိုစမ်းသပ်ခြင်း
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုခြင်း၊ လူမဆန်သောပုံစံနှစ်မျိုးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု - သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ (၂၀၂၁)
Realyourbrainonporn (scienceofarousal.com) သည်ထိတွေ့မှုရှိသည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် shills.
realyourbrainonporn.com (pornographyresearch.com) သုတေသနစာမျက်နှာရှိအခြားကဏ္sectionsများကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်ကြည့်ပါ -
porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ YourBrainOnPorn.com ၏ဥပဒေမဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုများတွင်ပါဝင်နေ
ရှည်လျားသောနောက်ဆုံးမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့ (RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများက) ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တစ်ခုအစီအစဉ်-မောင်းနှင်စုပေါင်းအဖြစ်လည်ပတ်သော
RealYBOP မှကျွမ်းကျင်သူများအား xHamster မှလျော်ကြေးပေးနေသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အသုံးပြုသူများကိုညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်စေရန်ဖြစ်သည်။
သူတို့ကလူသိရှင်ကြားအများကြီးလက်ခံရရှိပေမယ့် Porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ကွီးကွပျမှူးရှိနေခြင်းနှင့်အတူငယ်တစ်ခု, အသံဆိုသော်ငြားလူနည်းစုကိုကိုယ်စားပြု
porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ကမ္ဘာ့အများဆုံးအသုံးများဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေလက်စွဲစာအုပ်, ရောဂါများခြင်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး (ICD-11) နဲ့ခြေလှမ်းထဲကဖြစ်ပါတယ်
နီးပါးအပေါငျးတို့သမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စာတမ်းများ၏အစောပိုင်း Prause ဆောင်းပါးယခင်ဝေဖန်မှုအတွက်ဖြေရှင်းခဲ့သည်
သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်တစ်ဦးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်၏သမိုင်းနှင့်အခြားသူများ '' လေ့လာမှုများရှိသည် Porn အမျိုးမျိုးအဖွဲ့ဝင်
disinformation ဆိုတဲ့စကားလုံး, မှားယွင်းစွာတင်ပြ, ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အမှားဆိုတာသိစေချင်တယ်: အမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ချယ်ရီ-ကောက်ယူစာတမ်းများဖော်ထုတ် - တစ်ဦးချင်းစီ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့သုတေသနအပိုင်း၏ YBOP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ links:
ခန္ဓာကိုယ် Image ကိုပုဒ်မ